राइफल किन्न प्रतीतपत्र खोल्न स्वीकृति माग
काठमाडौं, ३ असार । नेपाली सेनाले इजरायलबाट गलिल राइफल, थोलीगठ्ठा र पार्टपुर्जा ल्याउन प्रतीतपत्र एलसी खोल्ने स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । सैनिक मुख्यालय जंगीअडेडाले जेठ ३२ मा रक्षा पत्र पठाएको हो...
भूकम्पपीडितलाई पुराना मोबाइल निःशुल्क दिइने ! हेप्नुको पनि हद हुन्छ
काठमाडौं, ३ असार । स्टोरी साइकलले कलर्स मोबाइलसगको सहकार्यमा भूकम्पपीडितलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले पुरानो फोन नयाँ जीवन भन्ने अभियान सुरु गरेको छ । अभियानअर्न्तर्गत राजधानीमा उपभोक्ताले नयाँ...
तीन लाख पचाउन आमाबाबुले नाति र छोरीलाई बिक्री गरे
जनकपुरधाम, ३ असार । नौ महिनाकी गर्भिणी २३ वर्षीया सुशीला ठाकुर बुधबार जसोतसो हिँड्दै धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय आइपुगिन्। चिकित्सकले दुईतीन दिनमै बच्चा हुनसक्छ भने पनि घरमा आराम गर्नुको साटो चर्को घाममा प्रहरीकहाँ आइपुगेकी...
अबको दुई दिनभित्र एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं, ३ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्षको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको नतिजा दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि संकलित परीक्षार्थीको प्राप्तांकको रुजु गरिरहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले...
एमाओवादीका केन्द्रीय नेताले युवतीलाई गर्भ बोकाएर अवैध बच्चा जन्माए, यस्तो छ रामकहानी !
काठमाडौं, २ असार । एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन ६ वर्षदेखि अवैध सम्बन्ध राख्दै आएकी प्रेमिकाबाट जन्मिएका बच्चाको बाबु बनेका छन् । यसअघि हेमन्त र ती महिलाको सम्बन्धलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरसमेत पटकपटक...
दलहरुबीच मध्यरातमा भएको १६ बुँदे सहमतिको नयाँ खुलासा, किन गरियो सहमति ?
काठमाडौं, २ असार । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा मित्रराष्ट्र भारतले कुनै प्रकारले सुइँको नपाओस् भन्नेमा चार प्रमुख दलका नेताहरु अत्यन्त सचेत बनेको जारकारीमा आएको छ । गत जेठको तेस्रो साता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण...
सीके राउतलाई मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टिको समर्थन
काठमाडौ, २ असार । बेलायती मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टि इन्टरनेशनलले नेपालमा राजद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका सिके राउतको आन्दोलनलाई आफ्नो समर्थन कायमै रहेको जनाएको छ । तर आफूले उनको वैचारिक समर्थन भने नगर्ने दाबी एमनेष्टिले गरेको छ...
रामदेवको शिविरमा लैजान राखिएका २२ बालबालिकाको उद्दार
काभ्रे, २ असार । भूकम्प प्रभावित बालबालिकालाई अनुमतिबिना नै भारतीय योग गुरु रामदेवको आश्रममा लैजानका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका बाइसजना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। भूकम्पपछि विभिन्न स्थानका बालबालिकालाई संकलन जम्मा गरी रामदेव पतञ्जली योगपीठ बनेपामा...
राजधानीमा कति छन् पेसेवर चोर ? ६० जना चोर हिरासतमा
काठमाडौं, २ असार । उपत्यकामा पाँच सयभन्दा धेरै पेसेवर ‘चोर’ रहेको अनुमान छ । यसमध्ये करिब ६० जना प्रहरी हिरासतमा छन् । १२ वैशाखको भूकम्पयता महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्र ५० जना चोरीका अभियुक्त पक्राउ...
श्रीमतीको अफिसबाट पतिले यसरी चोरी गरे
काठमाडौं, २ असार । उपत्यकामा जब चोरी बढ्न थाल्छ, प्रहरी अधिकारीहरु भर्खरै जेलबाट छुटेका कैदीको विवरण पल्टाउन थाल्छन् । चोरी तथा डाँका मुद्दामा जेल परेकाहरु छुटेलगत्तै फेरि चोरीमा लाग्ने भएकाले यस्तो समस्या प्रहरीले झेल्ने...
राहतमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गरिने
काठमाडौं, २ असार । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले राहतका नाममा भएका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङ सभापति रहेको समितिको मंगलबार बसेको...
बाढीपीडितका लागि आएको चालीस करोड कहिले बितरण हुन्छ ?
काठमाडौं, २ असार । गत बर्खामा मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रसाथै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले विस्थापित भएका सयौं घरपरिवारको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था र व्यक्तिहरूले दिएको झन्डै ४० करोड रुपैयाँको सहयोग सरकारले अझैसम्म...
« 1 … 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 … 1,314 »
थप २५ जना संक्रमितले जिते कोरोना
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १८ सय नजिक पुग्यो, सोमबार मात्रै २२६ मा पुष्टि
१२ जिल्लाका सिडिओसहित ४४ सह–सचिव, उप–सचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् सूची
नेपाल एयरलाइन्सका तीन चार्टर उडान हङकङमा, ५८२ जना फर्किए, अरु तीन उडान गरिने
झापाको कचनकबल क्वारेन्टाइनमा बसेका आन्दोलित हुनुको खास कारण
जर्मन बुण्डेस लिगा फुटबलमा आरबी लेइप्जिग विजयी
कोरोना भाइरस नेपाल: साबुनको साटो खरानी, माटो वा रिठ्ठाले हात धोएर सङ्क्रमण रोकिन्छ कि रोकिदैँन?
स्याङ्जामा ५ जना कोरोना संक्रमित थपिए, गण्डकी प्रदेशमा ३७ पुग्यो